Sygic GPS Navigation & Maps 18.2.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 18.2.4 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Sygic GPS Navigation & Maps
Sygic GPS Navigation & Maps ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Should you have any questions, please visit sygic.comsupport. We are here for you7daysaweek.
If you like our app, please leaveareview or spread the word at sygic.comlove. Thank you for your support.
**This is an add-on feature, you can check out our latest offers at https:eshop.sygic.comen
By installing, copying or using all or any portion of this software you accept all the terms and conditions of this agreement: https:www.sygic.comcompanyeula
Sygic - ဂျီပီအက်စ်, Navigation 200 ကျော်သန်းယာဉ်မောင်းများကယုံကြည်စိတ်ချ, ကမ္ဘာ့အများဆုံးဒေါင်းလုတ်လုပ်ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း app ကို ဖြစ်ပါတယ်။ အော့ဖ်လိုင်း 3D မြေပုံများအားအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရှိဘဲ GPS စနစ်အညွှန်းအဘို့သင့်ဖုန်းပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားသည်။ သင်အမြဲ Sygic ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းအပေါ်အားကိုးနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့သည်မြေပုံအခမဲ့ အတွက်တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကို update ။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုပင် မရှိဘဲနဲ့, ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားလာ
•ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပိုမိုသန်း 500 အသုံးပြုသူများထံမှစုဆောင်းဒေတာတွေနဲ့အရှိဆုံးတိကျ Real-time အသွားအလာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုရှောင်ကြဉ်ပါ *
• cockpit သင်သည်သင်၏ကားတစ်စီး၏ Real-time စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသထားတယ်။ **
သင်ဟာတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး7ရက်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကမ္ဘာ့ဖလား + ယာဉ်အသွားအလာလိုင်စင်အတွက်ရရှိနိုင်သမျှသော features တွေမောင်းစမ်းသပ်နိုင်သည်။7ရက်ပြီးနောက်သင်အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သက်တာပရီမီယံလိုင်စင်မှ upgrade ။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသင့်, sygic.comsupport သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့7ရက်တစ်ပါတ်ဒီမှာဖြစ်ကြသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်ထားခဲ့ပါသို့မဟုတ် sygic.comlove မှာစကားလုံးပျံ့နှံ့ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
** ဤ add-on ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါရပ်ကိုသင် https:eshop.sygic.comen မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုထွက်စစျဆေးနိုငျ
သင်ဤသဘောတူညီချက်အပေါငျးတို့သစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားကိုလက်ခံအားလုံးသို့မဟုတ်ဤ software ကိုမဆိုဆက်ဆံ install လုပ်ကူးယူသို့မဟုတ်သုံးပြီး by: https:www.sygic.comcompanyeula
Sygic GPS Navigation & Maps အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sygic GPS Navigation & Maps အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sygic GPS Navigation & Maps အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sygic GPS Navigation & Maps အား အခ်က္ျပပါ
Sygic GPS Navigation & Maps ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sygic GPS Navigation & Maps အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 18.2.4
Sygic GPS Navigation & Maps APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ